आज साउनको पहिलो सोमबारः भगवान शिवको पूजा आराधना गरिदैं, यसो गरे हुनेछ भाग्योदय ! « Jagaran News
आज साउनको पहिलो सोमबारः भगवान शिवको पूजा आराधना गरिदैं, यसो गरे हुनेछ भाग्योदय !
Published On : 20 July, 2020 8:45 am
काठमाडौं , साउन ५। हिन्दू धर्ममा साउन महिनामा भगवान शिव व्रत बसेर पूजा आराधना गर्दा मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ।धार्मिक पुराणका अनुसार अन्य दिनको तुलनामा साउन महिनामा भगवान शिवको पूजा आराधना गर्दा दुई गुणा लाभ मिल्ने गर्दछ।
भगवान शिवलाई प्रसन्न बनाउनका लागि भक्तजनले शिवलिंगमा फूल र प्रसाद चढाउने गर्दछन्। शास्त्रमा भगवान शिवलाई प्रसन्न बनाउनका लागि केही तरिकाका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। भगवान शिवको प्रिय महिना साउन र प्रिय बार सोमबार मानिन्छ । यस दिनमा शिवलाई मनपर्ने बेलपत्र, जल, पञ्चामृतद्वारा पूजाअर्चना गरिन्छ । साउन ५ गते ९आज० पहिलो सोमबार परेको छ । यो महिना र दिन शिवको स्तुति मानव तथा चराचर जगतका लागि निकै कल्याणकारी रहन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता रहि आएको छ ।
हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको अरू धर्मावलम्बीहरूको भन्दा धेरै आस्थाका धरोहरहरू रहेको पाइन्छ ।
हिन्दु धर्मावलम्बीहरूले भगवान शिवको शक्तिलाई विशेष रूपमा लिने गर्दछन् । हरेक वर्ष श्रावणको सोमबार ब्रत बसेर शिवको पुजा आराधना गर्ने चलनले पनि हिन्दु धर्मावलम्बीहरूका लागि ठुलो महत्व बोकेको छ । श्रावण महिनालाई भगवान शिवको प्रिय महिनाको रूपमा चिनिन्छ ।
के छ महत्वर?
ब्रत बस्दा के गर्ने के नगर्ने रु
– बिहान छिट्टै उठ्ने,
– शुद्ध वस्त्र लगाउने,(काले वस्त्र कहिल्यै नलगाउने)
– एकछाक मात्र भोजन गर्ने,
– पुजाको थाली तयार गर्दा चामल, बेसार, मेहेन्दी, अबिर, सिन्दुर, कपुर, धुपबत्ती, धतुरोको पुष्प, मह, काँचो दुध, भष्म ९खरानी०, गंगाजल, बेलपत्र, अष्टगन्ध, चन्दन आदि समावेश गर्ने,
– भगवान शिवलाई रातो फुल नचढाउने, ९निलो र सेतो फुल भगवान शिवको प्रिय फुल हो०
– शुद्ध आसनमा बसी शिव भगवानको ध्यान गर्ने, पाठ पढ्ने र हातमा अक्षता र फुलपाती लिएर सङ्कल्प गर्ने,
– तामाको थालिमा बेलपत्र राखेर त्यसमाथी शिवलिङ्ग स्थापना गर्ने,
-शिवलिङ्ग स्थापना गर्दा घरभित्र नभएर घरको आँगनमा स्थापना गर्ने यदि घरमा सम्भव नभए शिवको मन्दिर जाने ।
के खाने के नखानेरु
खान हुने । आलु, दही, फलफुल, फलफुलको जूस, दुधमा बदाम भिजाएर, कागती पानी, शुद्ध दुधमा पकाएको साबुदाना
खान नहुने । मुसुरोको दाल, भ्यान्टारबैगुन, लसुनरप्याज, च्याउ, अण्डा, माछा९मासु०